Inkonzo kunye noKhuphelo
Umatshini wemaski ophantsi
N95 umatshini wokwenza imaski
Umatshini we-Earband Welding
Imaski yokucheba umatshini
Isigqumathelo somatshini wokubopha umda
Umatshini wemaski we-KF94
Umatshini wesigqubuthelo sendebe
I-99 iShangyu Road, iXinbang Idolophu, iSithili saseSongjiang, eShanghai
Thetha noHaoJing + 86 18652005139
komphetho intloko umtya umaski ukuwelda umatshini abenzi S ...
Inkcazo yevidiyo yokuThelekisa ...
China n95 imaski ukwenza umatshini ubuso imaski indlebe loop wel ...
Inkcazo yevidiyo Inkcazo epheleleyo ...
OEM Manual imaski Machine umatshini yemveliso tyaba ...
Imveliso yevidiyo Inkcazo yeflethi ...
China Umatshini weServo weMask kuMthengisi weFlat Face Mask Mac ...
Iimpawu zevidiyo yeMveliso 1.Le machi ...
I-china n95 imaski yokwenza umatshini ubuso imaski indlebe iluphu iwelding umatshini oluzenzekelayo indlebe band umatshini iwelding
I-1.Izixhobo zamkela iteknoloji ye-welding ye-ultrasonic, ene-high quality, ukusebenza kweendleko eziphezulu kunye nokuzinza okuphezulu.
Mnye kuphela umntu ekufuneka esebenze isixhobo esinye, ukunciphisa iindleko zabasebenzi.
3.Feeding, ukusika oluzenzekelayo, ukuwelda oluzenzekelayo blanking oluzenzekelayo zikhuselekile kwaye lula.
I-4.Ukudibanisa okuzenzekelayo kweebhutsi zebhathathane kunokukhawulezisa ukubekwa kwemidlalo ukuze kuhambelane nemveliso yeemaski zebhabhathane.
China Umatshini weMask Servo uMthengisi weFlat yoBuso boMatshini oMatshini oMatshini oMatshini oMnyama
Umgca wemveliso ngumatshini wemaski ozenzekelayo omnye uye komnye, umatshini omnye womzimba uqhuba umatshini weendlebe omnye.
Emva kokuba umatshini womzimba ophambili ukhuphe umzimba wemaski, iphepha lemaski eligqithisiweyo lihanjiswa sisakhiwo sebhanti yokuhambisa ukuya phezulu kwipleyiti yokuqala ngaphambili kumatshini webhanti lendlebe, kwaye ekugqibeleni iphepha lemaski libekwe kwisitya semaski umatshini webhanti yendlebe ngokucinezela i-servo motor. Umatshini weendlebe ugqibezela ukuwelda kunye nokusongelwa kweebhanti zeendlebe zesigqumathelo, Ukuze kugqitywe imveliso yemaski yendlebe.
Umatshini wemveliso ye-OEM yemaski yemaski umatshini wokuvelisa imaski ephezulu Isantya seflethi yendlebe umatshini wokuwelda
ukusika ngokuzenzekelayo kunye nokufakela i-earloop kumzimba womaski, usebenzisa ii-servo motors ezi-8 ezikhawulezayo, zikhawulezisa ukuya kuthi ga kwi-80-120 iziqwenga / imizuzu, usebenzisa indawo yesikwere yentloko, indawo ye-welding indawo ichanekile kwaye iqinile, ulwakhiwo olulula, ukusebenza okuzinzileyo.
Kwaye ukusetyenziswa kwesitshisi esikhulu sokukhupha, ukukhupha ubushushu ngokukhawuleza, ukuqinisekisa uzinzo lwewelding ye-ultrasonic.
Umatshini wokugoba we-OEM we-3ply china umatshini wemaski ethe tyaba
Oku ikakhulu iqulunqwe multi-umaleko umatshini ukutya feed, ibhanti imibimbi bokwakha indlela, indlela bokwakha indlela, umtya yokondla indlela, cuke welding indlela die-ukusika indlela kunye nezinye iindlela, leyo ngokuzenzekelayo ukugqibezela ukongeza oluzenzekelayo beam umqadi kunye nokwakha umzimba.
Imaski yemanyuwali yokwenza umatshini abavelisi bendlebe yokujikeleza ubuso bemaski abavelisi
1. Isetyenziselwa ukudibanisa iindlebe zeendlebe zeemaski ezahlukeneyo.
2. Isithuba esinokuhlengahlengiswa ukuze sikunike uluhlu olufanelekileyo lokukhetha.
3. Ukutyisa ngesandla, ukusika okuzenzekelayo, ukuwelda okuzenzekelayo, ukusebenza kokutya okuzenzekelayo kukhuselekile kwaye kufanelekile.
4. Ibhendi yendlebe yesigqubuthelo sebhabhathane linokudityaniswa ngokuzenzekelayo, kwaye indawo yokumisa inokutshintshwa ngokukhawuleza ukuze iqhelane nemveliso yeemaski ezahlukeneyo.
Umatshini wemveliso yemaski ethe tyaba earloop umatshini womatshini we-earloop umatshini wokujonga imaski
I-1.Welding yemitya yeendlebe kwiimaski ze-KN95.
2. Isithuba esilungelelanisiweyo, esikunika uluhlu olufanelekileyo lokukhetha.
3. Ukutyisa ngesandla, ukusika okuzenzekelayo, ukuwelda okuzenzekelayo, ukusebenza ngokulayisha ngokuzenzekelayo kukhuselekile kwaye kufanelekile.
4. Ukuzenzekelayo ukuwelda imitya yemaski yendlebe, ukutshintshwa okukhawulezileyo kwezixhobo zokubekwa ukuze ziqhelane neentlobo ezahlukeneyo zemveliso yemaski.
Itheyibhile 5.Rotary yokusebenza, leyo ngokukhawuleza ukujikeleza imaski nokunyusa isantya iwelding.
Ubuso beMaski Umatshini china n95 umatshini wokwenza imaski umatshini ozenzekelayo wokubopha umatshini
1.Izixhobo zamkela indawo emi-6 yokujikeleza okuzenzekelayo, ngetekhnoloji ye-welding ye-welding kunye nokutywina okuzenzekelayo kwemaski.
Inkqubo ephambili iphambili ibandakanya ukulayishwa okwenziwa ngesandla, ukuwelda kwe-ultrasonic kunye nokutywinwa komphetho, kunye nokwehlisa ngokuzenzekelayo.
Ukugqitywa okuzenzekelayo kwenkqubo ye-welding, ukusebenza ngokukuko kunye nenqanaba lesivuno esiphezulu.
4.Ingakhawuleza itshintshe indawo yokuma ukuze iqhelane nemveliso yeentlobo zeemaski zebhabhathane.
I-Kn95 Maski Umatshini wokwenza umatshini wokubopha umatshini kumatshini wesikhululo esinye sokubopha umda
Isixhobo se-1 sisixhobo sokutywina esisezantsi esinomgangatho ophantsi wokusilela.
2. Inkqubo ephambili ngokutyisa ngesandla, i-ultrasonic welding edge.
3. Inkqubo elula ye-welding, ukusebenza ngokulula kunye nesivuno esiphezulu.
4. Inokuziqhelanisa nokuveliswa kweentlobo ezahlukeneyo zeemaski zebhabhathane.
umphetho intloko umtya umaski ukuwelda umatshini umatshini Isikhululo esinye nothango lwaso lobhedu umatshini nisishiye
Inkqubo ephambili yokondla ngesandla, i-ultrasonic welding edge.
Inkqubo ye-3.Simple welding, ukusebenza ngokulula kunye nesivuno esikhulu.
4.Ingahambelana nemveliso yeentlobo ezahlukeneyo zeemaski zebhabhathane.
5.Safety nothango lwaso lobhedu, xa kukho into kwindawo luvo, izixhobo ziya kuyeka ngokuzenzekelayo ukubaleka ukuqinisekisa ukhuseleko yomsebenzisi.
Semi oluzenzekelayo Imaski Umatshini Kn95 Imaski Umatshini Uqoqosho imaski ukusika umatshini
Umatshini wefilimu okhawulezayo usebenzisa itekhnoloji ye-welding ye-ultrasonic ukuvelisa ngokuzenzekelayo ii-2-5 zeebhatyi zomzimba webhabhathane. Iinkqubo ezibandakanyiweyo zibandakanya ukondla ngekhoyili, ukondla umqadi weempumlo, ukuwelda imaski, ukusika imaski, kunye nokusika umzimba okuphambili.
Izixhobo zivelisa umzimba ophambili wesigqubuthelo sebhabhathane ngokusebenzisana kwenkqubo yokondla, inkqubo yokwenza ilaphu, kunye nenkqubo yentsimbi yokwenza kunye nokusika.
I-china n95 umatshini wokwenza imaski kumatshini wokucheba umatshini
Ukuze kuhlangatyezwane nemfuno zentengiso, ukungunda kunokutshintshwa ukuze uvumelane nemveliso yeentlobo ezahlukeneyo zemizimba yebhathane.
Umatshini wokwenza imaski engeyiyo ephothiweyo
Lo ngumatshini ozenzekelayo ngokupheleleyo ekuveliseni umgca wokuveliswa kwemaski. weld 3 ukuya ku-6 maleko ilaphu non-ephothiweyo ilaphu, meltblown ilaphu, isebenze carbon kunye filter izinto usebenzisa ubuchwepheshe cuke. Ngaba imaski yokusonga ezenzekelayo inokusetyenzwa nge-3 M9001 / 9002 yokugoba imaski. Kuxhomekeka kwizinto ezisetyenzisiweyo ezingasetyenziswanga, iimaski zinokuhlangabezana nemigangatho eyahlukeneyo, enje nge-FFP1 / FFP2 / KN95 .. Akukho msebenzi wencwadana uyimfuneko kuyo yonke le nkqubo, enokunciphisa inkunkuma ye-welding, ukusonga, ukutywina, ukurola nokusika Imigca yemveliso ephothiweyo. Izinto zayo ziqinisekisa ngokufanelekileyo umgangatho wemaski evelisiweyo. Zonke iimveliso ziveliswa ngoomatshini.
ubuso imaski umatshini wokwenza
Lwedilesi: 99 Shangyu Road, Xinbang Town, District Songjiang, Shanghai
Ifowuni: +86 18652005139